Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Lugood in Nexus 5/7/10/4
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Lugood in Nexus 5 / Nexus 7/10/4
Si kastaba ha ahaatee, Lugood waa iPhone, iPad iyo iPod tababare xirfad leh, taas oo aanu yuusan kuu soo gudbin music aad Nexus 5. Sidaas darteed, waxaad u leedahay in gargaar weydiiso ka ah qalab Xisbiga 3-in ay ka Lugood wareejiyo music in Nexus 5. Ka mid ah 3- qalabka xisbiga, Wondershare TunesGo si weyn lagu talinayaa. waxa ay taasi arrin fudud si ay u gudbiyaan playlists Lugood in aad Nexus 5/7/10/4.
Habka 1. Raadi Songs Lugood Media Folder iyo Copy Lugood in Nexus 5/7/10/4
Habka 2. Transfer Lugood Music inay Nexus 5/7/10/4 la Tool Saddexaad ee Xisbiga
Habka 1. Raadi Songs Lugood Media Folder iyo Copy Lugood in Nexus 5 / Nexus 7 / Nexus 10 / Nexus 4
In qaybta 2, waxaan ku tusi doonaa sida loo ka Lugood wareejiyo music in Neuxs 5/7/10/4. Maxaa dhacaya haddii aanad doonayn inaad iibsato software kasta oo samayn Lugood in Nexus music kala iibsiga? Waxaa jirta waddo dadka ka baxay. Waxa kaliya wax yar ka xanibayo ah.
Fur Lugood oo taga si Edit > Tixraaca ... > Advanced . Hubi in aad saxday files Copy in Lugood warbaahinta folder markii isagoo intaa ku daray in maktabadda . Haddii ay sidaas tahay, waxaad u tagi kartaa warbaahinta Lugood ee folder.
Ayaa warbaahinta folder Lugood waxaa lagu keydiyaa meel oo kala duwan, sida ay OS Windows ah. Hubi halkan:
Windows 7/8: C: \_ Users \_ username \_ My Music \_ Lugood \_
Windows Vista: C: \_ Users \_ username \_ Music \_ Lugood \_
Dul warbaahinta Lugood ee folder oo heli folder music hoos buugga. Fur folder music ah, oo waxaad arki doontaa songs badbaadiyey ee galalka kala duwan oo ku salaysan fanaaniinta ay.
Connect aad Nexus 5/7/10/4 in computer via cable USB ah. Qalab aad la Jaha doonaa sida drive dibadda adag. Raadi oo la furo. Copy music ka music folder Lugood in aad Nexus 5/7/10/4.
Habka 2. Transfer Lugood Music inay Nexus 5 / Nexus 7/10/4 la Tool ah
Sida aad ogtahay, computer Mac loo abuuray by Apple oo ma garan karaan qalab Android. Waxaad aan buuraha kartaa telefoonka Android ama kiniin ahaan drive dibadda adag ka dibna nuqul music Lugood, waxa uu. Xaaladdan oo kale ah, Wondershare TunesGo (Mac) ama TunesGo Wondershare u Android (Win) yimaado aad u. Iyada oo ay caawimaad, waxaad si fudud u awoodi karaa inuu wareejiyo oo dhan ama music soo xulay iyo playlists ka Lugood in Nexus 5/7/10/4 effortlessly. Download software oo la siiyo shot a.
Download iyo rakibi TunesGo Wondershare on Mac ama PC.
Connect aad Google Nexus 5/7/10/4 si Mac deeruhu cable USB ah oo wuxuu galay.
Orod software iyo Mac idin xusuusin doonaa haddii aad u ordaya Lugood. Raac waxa. Markaas, waxaad arki doontaa TunesGo Wondershare u muuqataa dhanka midig ee Lugood.
In uu furmo suuqa hoose ee TunesGo, riix nidaameed tab.Then, waxaad dooran kartaa nidaamka maktabadda oo dhan Lugood ama u hagaagsan loo doortay Lugood music, filimada iyo playlists in Nexus 5/7/10/4. Dooro mid ka mid doorasho ka dibna riix nidaameed .
Ama, waxaad riixi kartaa Jiid & dejinta tab, iyo jiididda jeedi doonayo music iyo playlists in Google Nexus 5/7/10/4.
Lugood Best u Android Software "
Alternative A Great in Transfer File Android
Best 4 lagu bedelan karo doubleTwist
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Music / heeso ka Lugood in Nexus 5 / Nexus 7 / Nexus 10 / Nexus 4